Ch 14 Luke – 2kalluunka
Home / Kitaabka Quduuska ah / Injiilka Luukos / Ch 14 Luke
14:1 Oo waxaa dhacday in, Ciise goortuu guriga galay hogaamiyaha Farrisiintii qaarkood waxay ku saabsan, oo sabti ah inuu kibis cuno, waxaa dhacay inay logu.
14:2 Oo bal eeg, nin isaga ka hor la dhibay oo la bararka.
14:3 Iyo wax ka qabashada, Ciise wuxuu ka hadlayay in khubarada sharciga iyo Farrisiintii, oo wuxuu ku yidhi, "Ma xalaal baa in sabtida la daaweeyo?"
14:4 Laakiin way aamuseen. Oo weliba sida runta ah, qaadashada isagii, wuuna bogsiiyey, markaasuu sii daayay.
14:5 Iyo wax ka qabashada iyaga, ayuu yiri, "Waa kuwee oo idinka mid ah dameer ama dibi ah god ku dhici doonin, oo aan dhakhso loo soo baxay dumin doonaa, maalintii sabtida?"
14:6 Oo weliba iyagu way awoodi waayeen in ay ka jawaabaan isaga inuu waxaas oo dhan ku saabsan.
14:7 Markaasuu masaal isagoo sheegay, in kuwii loo yeedhay, ogaanaya sida ay u doorteen kursiyada hore miiska, isagoo ku leh:
14:8 "Marka aad martiqaaday in ay aroos ah, ma u fadhiiso in meesha ugu horeysa, waaba intaasoo qof ka badan u sharrifnay Binii naftaada ka badan waxaa laga yaabaa in lagu martiqaaday isaga by.
14:9 Markaasuu wuxuu u yeedhay oo waa kan labada adiga iyo isaga, dhowaanin, Waxaa laga yaabaa in idinku leeyahay, 'Meeshan Sii isaga. "Oo markaas waxaad bilaabi lahaa, ceeb, inay qabsoonto ee la soo dhaafay.
14:10 Laakiin marka aad casuumay, tago, fadhiiso meesha u hoosaysa, si, markuu kii kuu yeedhay gaaray, Waxaa laga yaabaa in uu kugu leeyahay, Saaxiibow, sare u soco. 'Markaas waxaad yeelan doontaa ammaanta hortooda kuwa cuntada fadhiisan wada aad la.
14:11 Waayo, mid kasta oo isa sarraysiiya waa noqon doonaan Dullaysan, oo ku alla kii is-hoosaysiiyana waa la sarraysiin doonaa. "
14:12 Markaas ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in mid ka mid ah kii u yeedhay: "Marka aad diyaariyo qado ama casho, ma doortaan in ay u yeedhin saaxiibbadaada, ama walaalahaa, ama qaraabada aad, ama derisyadaada hodanka ah, waaba intaasoo ay markaas idiin ku yeedhi laga yaabaa in soo laabashada iyo bixinta lahaa dhigay inaad.
14:13 Laakiin marka aad diyaariso iid, wac masaakiinta, dadka naafada ah, curyaannada, iyo indhoolayaasha.
14:14 Oo waxaad noqon doonaan tan barakaysan, maxaa yeelay, iyagu ma ay leeyihiin hab ay kuugu abaalgudaan,. Sidaas daraaddeed, abaalkiinna noqon doono wakhtiga sarakicidda kuwa xaqa ah. "
14:15 Qof fadhiya miiska isaga la Oo markay waxyaalahaas maqleen, wuxuu ku yidhi isagii, "Waxaa barakaysan kan kibis ku cuni doona boqortooyada Ilaah."
14:16 Sidaas daraaddeed wuxuu ku yidhi isagii: "Nin baa wuxuu diyaafad weyn u darbay, oo uu ku casuumay badan.
14:17 Oo isna wuxuu addoonkiisii ​​u diray, Saacaddii iidda, u sheego casumay in ay soo; waayo, haatan wax diyaar u ahayd.
14:18 Oo mar kulligood waxay bilaabeen inay fikir keliya ku marmarsiiyoodaan. Kii u horreeyey ayaa ku yidhi isagii: "Waxaan soo iibsaday beer, oo waxaan u baahanahay inaan tago oo aan soo arko. Waxaan kaa codsanaynaa in aad iga raalli ahaato.
14:19 Mid kale ayaa yidhi: "Waxaan iibsaday shan qindi oo dibi ah, oo waxaan u tegayaa inaan fiiriyaa. Waxaan kaa codsanaynaa in aad iga raalli ahaato.
14:20 Mid kale ayaa yidhi, 'Waxaan naag, oo sidaas daraaddeed ma waxaan si ay u tagaan karo. '
14:21 Oo waxay soo laabtay, addoonkii waxaas ayuu sayidkiisii ​​u sheegay. Markaasuu aabbihiis qoyska, aad uga xanaaqsan yihiin, wuxuu ku yidhi midiidinkiisii: Tag Dhaqso jidadka iyo xaafadaha magaalada oo. Oo halkan keeni masaakiinta, iyo dadka naafada ah, iyo indhoolayaasha, iyo curyaannada. '
14:22 Kolkaasaa addoonkii ku yidhi: 'Taasi waxaa lagu sameeyay, sidaad amar ku, sayidkaygiiyow, oo weli ay jirto qolka. '
14:23 Markaasaa sayidkii wuxuu addoonkii ku yidhi: 'Baxa Jidadka iyo wadiiqooyinka oodaha, oo dadka ku qasab inay soo galaan, si uu gurigaygu u buuxsamo.
14:24 Waxaan idinku leeyahay, mana jiro mid ka mid ah kuwa Nimankaas loo yeedhay dhadhamin maayo iidda. '"
14:25 Hadda dad badan oo u safray isaga la. Wuxuuna u jeestay agagaarka, Wuxuu iyaga ku yidhi:
14:26 "Haddii qof ii yimaado, oo aanu aabbihii neceb, iyo hooyadiis, iyo xaaskiisa, iyo carruurta, oo walaalo ah, wiilal iyo gabdhoba,, oo ay haa tahay, xataa naftiisana, isagu ma awoodo in uu noqdo xer.
14:27 Ku alla kii aan iskutallaabtiisa soo qaadan oo aan iga daba iman, Waa kuma ahaan karo xer.
14:28 Waayo, bal yaa idinka mid ah, doonaya inuu noobiyad dhiso oo, lahaa aan kolkii hore fadhiisan oo loo ogaado kharashka waxaa loo baahan yahay in, si loo arko haddii uu leeyahay ay tahay si ay u dhammeystiraan?
14:29 Haddii kale, ka dib markii uu ka dhigeen doonaa aasaaska iyo ma ay dhammayn kari waayo, qof kasta oo arka waxa ay bilaabaan inay ku qoslaan,
14:30 oo wuxuu ku yidhi: Ninkanu wuxuu bilaabay inuu wax dhiso waxa uu ahaa ma dhammayn kari waayay. "
14:31 Or, waxa boqorka, horumarinta si ay u galaan boqor kale dagaal, aan kolkii hore fadhiisan oo tashan inuu lahaa waxaa laga yaabaa, toban kun oo, in uu la kulmo mid ka mid ah kuwa yimaado kan labaatan kun?
14:32 Haddii aadan, markaas intuu kan kale weli fog yahay, diro wafdi, waxa uu ku weydiin lahaa isaga lagu heshiiyo.
14:33 Sidaa darteed, qof kasta oo idinka mid ah oo aan ka tegin wuxuu leeyahay oo dhan uu leeyahay ma awoodo inuu xer iima ahaan.
14:34 Cusbadu waa wanaagsan. But if the salt has lost its flavor, with what will it be seasoned?
14:35 It is useful neither in soil, nor in manure, so instead, it shall be thrown away. Kan dhego wax lagu maqlo, lahu ha maqlo. "